मिश्र कान्तिपुर दैनिकमा प्रमुख उप-सम्पादकका रुपमा कार्यरत छन् । उनी स्वास्थ्थ तथा विज्ञान विषयमा विगत २५ वर्ष देखि पत्रकारिता गरिरहेका छन् ।
बीसभन्दा बढी मुलुकमा देखिएको ‘मंकीपक्स’ रोगबाट नेपाल पनि जोखिममा परेको छ । विश्वको कुनै एक भागमा संक्रमण फैलिएपछि हजारौं किलोमिटर टाढा रहेका मुलुकसमेत जोखिममा रहने र संक्रमण विस्तार हुन सक्ने भएकाले सचेत रहन विज्ञहरूले आग्रह गरेका छन् । नेपालमा यो भाइरस हालसम्म देखिएको छैन ।
कोभिड–१९ को संक्रमण दुई सातायता केही बढेको पाइएको छ । भारतमा ओमिक्रोनको नयाँ भेरिएन्ट ‘बीए २.१२’ कारण पछिल्ला दिनमा संक्रमण बढेको छ । त्यसकै कारण नेपालमा पनि संक्रमण वृद्धि भएको आशंकामा स्वास्थ्य सेवा विभागले अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।
वैशाख १०, २०७९
विज्ञहरूले नेपाल औषधिसँग सम्बन्धित नीति बनाउन अब्बल भए पनि व्यवहारमा कुनै पनि नीति लागू नहुने गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले औषधिसँग सम्बन्धित अनुसन्धान र विकासमा स्रोत साधनको कमी र विद्यमान स्रोत साधनको प्रभावकारी परिचालन नभएको बताएका छन् ।
भारतका विभिन्न राज्यमा कोभिड संक्रमण दर उच्च गतिमा बढेसँगै नेपालमा फेरि झस्को पसेको छ । सम्भावित लहर र जोखिमबाट बच्न कोभिडविरुद्धको खोप लगाउनुपर्ने हुन्छ । तर, खोपप्रतिको सुस्तताका कारण जोखिम पुनः भित्रिन सक्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् । अझैसम्म नेपालमा एक चौथाइले कोभिडविरुद्घ कुनै पनि खोप लिएका छैनन् । पूर्ण खोप लिएको धेरै समय भएका व्यक्तिले पनि प्रतिरोधक क्षमता कायम राख्न अतिरिक्त खोप लिन विज्ञहरूको सुझाव छ ।
वैशाख ३, २०७९
५–११ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाले अझै कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन पाएका छैनन् । सरकारले मार्च महिनाभित्रै खोप लगाइसक्ने घोषणा गरे पनि अझैसम्म कहिलेबाट अभियान सुरु हुन्छ निश्चित भएको छैन ।
महामारीको डर, खोपको भर
कोरोना संक्रमणका कारण सुरु भएको मृत्यु शृंखला पछिल्ला ३ सातायता रोकिएको छ । २०७७ जेठ ३ मा पहिलो पटक कोरोनाबाट मानवीय क्षति भएको पुष्टि भएयता नेपालमा ११ हजार ९ सय ५१ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । करिब २२ महिनापछि मात्रै कोरोनाबाट हुने मृत्यु थामिएको हो । पछिल्लो पटक चैत ८ मा एक कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको थियो ।
बहुऔषधि प्रतिरोधी क्षयरोग रोक्न नसके ‘अवस्था भयावह’
नेपालमा बहुऔषधि प्रतिरोधी क्षयरोग (एमडीआर टीबी) को संक्रमणलाई समयमै नियन्त्रण नगरे आगामी दशकमा भयावह स्थिति आउने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् । नेपालजस्तो सानो मुलुकमा बर्सेनि २ हजार २ सय एमडीआर टीबीका रोगी थपिँदै जानु चिन्ताजनक रहेको उनीहरूको भनाइ छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले २०२१ मा सार्वजनिक गरेको एमडीआर टीबीको उच्च प्रकोप भएका ३० राष्ट्रको सूचीमा नेपाल पनि छ । ‘एमडीआर टीबीलाई समयमै
लोसपा अध्यक्ष ठाकुरको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर तर सुधारोन्मुख
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर र सुधारोन्मुख रहेको अस्पतालले जनाएको छ । भैरहवामा रहँदा अचानक स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि ७९ वर्षीय ठाकुरलाई बुधबार दिउँसो हेलिकप्टरबाट उद्धार गरेर काठमाडौंस्थित नेपाल मेडिसिटी अस्पताल ल्याइएको हो ।
धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा दुई दिनमा दुई जनाको कलेजो प्रत्यारोपण
भक्तपुरस्थित सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा दुई दिनमा दुई जनाको कलेजो प्रत्यारोपण गरिएको छ । गत आइतबार र सोमबार गरिएको प्रत्यारोपणमा नेपाली र भारतीय चिकित्सकको टोली संलग्न थियो । नेपाली टोलीको नेतृत्व केन्द्रका प्रमुख डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठ र भारतीय टोलीको नेतृत्व दिल्लीस्थित म्याक्स हस्पिटलका डा. शलिन अग्रवालले गरेका थिए ।
काठमाडौंमा विश्वकै सबैभन्दा बढी प्रदूषण
चैत्र १६, २०७८
‘वर्ल्ड एयर क्वालिटी’ को रिपोर्टअनुसार दुई दिनयता काठमाडौं विश्वकै प्रदूषित सहरको पहिलो स्थानमा छ । अघिल्लो साता नेपाल विश्वको १० औं प्रदूषित मुलुकमा र राजधानी काठमाडौं छैटौं प्रदूषित सहरमा परेको थियो । सोमबार काठमाडौंको वायुमण्डलमा वायुको गुणस्तर सूचकांक (एक्यूएआई) १५४ थियो ।